မြေ ရောင်းရန် အတွင်း Yangon
မှော်ဘီမြို့နယ် မြေအရောင်း (ID – 450)
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 450
မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် မြို့နယ်တွင်မြေရောင်းရန်ရှိပါသည်။ မြေ၏အကျယ်အ၀န်းမှာ ၃၂ ဧက ရှိပါသည်။ ၁၅ ဧကမှာ နှစ်သုံးဆယ် ဂရံမြေဖြစ်ပြီး အခြား ၁၅ ဧကမှာ လယ်ယာမြေ ဖြစ်ပါသည်။ မြေတွင် ၂၀၀၀၀ စတုရန်းပေရှိသော ဂိုဒေါင် နှစ်လုံးနှင့် ရုံးခန်းပါရှိပါသည်။
မြေ၏အရောင်းဈေးနှုန်းမှာဂရံမြေ တစ်ဧကလျှင် သိန်း ၅၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
121,401.72 Sq.M. Land area
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 1,202 other listings.
ရောငျးရနျအိမျသဈမြား အတွင်း Yangon